Herrenhaus @ Mado (A Serenbe Luxury Property) - I-Airbnb
Herrenhaus @ Mado (A Serenbe Luxury Property)
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Susan + Bobby
I-Herrenhaus @ Mado, indlu yombukiso yomklami we-Atlanta Homes & Lifestyle Serenbe ka-2017, iyindawo kanokusho etholakala enhliziyweni yendlu entsha ka-Serenbe, i-Mado. Jabulela yonke into uSerenbe ekunikezayo ukusuka endaweni emaphakathi ehamba ibanga lokuya e-The Spa @ Serenbe, Serenbe Yoga, Halsa Restaurant, Bamboo Juices, Studio 13 Pilates, The Gym @ Serenbe, izindlela zokuhamba izintaba, nokunye okuningi. Jabulela ukuhlala okunethezeka endaweni ekhangayo yendlu yombukiso yaseSerenbe phakathi neholide lakho elilandelayo kanye/noma uma ubaleka.
I-Herrenhaus @ Mado inamagumbi okulala angu-3 namagumbi okugezela angu-3.5. Ikamelo lokulala elikhulu litholakala ezingeni eliphezulu futhi linombhede omkhulu onendlu yokugezela enamakamelo amaningi, elinosilingi onama-vault angu-26', kanye ne-patio yangaphandle yangasese ebheke i-Mado (okungenye yamasevisi amahle kakhulu anikezwa yikhaya). Buka i-Mado kuvulande wakho wangasese kuyilapho uba nekhofi lakho lasekuseni eduze kwendawo yomlilo yangaphandle noma ingilazi yewayini nomunye wakho obalulekile ngaphambi kokuya esidlweni sakusihlwa kwenye yezindawo ezimangalisayo zokupheka zase-Serenbe. Ngaphezu kwalokho, izinga eliphezulu linelinye ikamelo lokulala elibonisa umbhede omkhulu negumbi lokugezela elingaphakathi (kanye, ikhabethe lokungena). Elinye ikamelo lesivakashi litholakala ezingeni lethala elinemibhede emibili egcwele futhi ekwazi ukungena endlini yangasese eneshawa ezimele yodwa. Izinga lethala liphinde libe nendawo yokuzijabulisa kanye ne-patio yalo yangasese nendawo yokungena. Izinga lethala liyindawo ekahle kakhulu yezingane yokuzijabulisa nokuzijabulisa ngenkathi abantu abadala bejabulela amazinga aphezulu ekhaya.
I-Herrenhaus itholakala eHamlet Mado entsha ka-Serenbe. I-Serenbe iwumphakathi ozinzile ogxile kwezempilo nenhlalakahle. I-Serenbe inezinto eziningi ezihehayo unyaka wonke kusukela e-Serenbe Playhouse edlala imibukiso ebukhoma eyenzeka emphakathini wonke, kuya kuzinhlobonhlobo zezidlo ezihlinzekwa yi-Serenbe's Organic Farm etholakala eHamlet of Grange, kuze kufike ezindaweni eziningi. imisebenzi ongayenza ngesikhathi uhlala njengokuhamba ngezinyawo i-Serenbe Trails edumile, i-Goat Yoga, i-Mountain Biking, nokunye okuningi.
Ngesikhathi sokuhlala kwakho, uzoba nabo bonke ubumfihlo obufisayo futhi obukufanele (njengoba ababungazi bengahlali emagcekeni, kodwa sihlala kwenye ingxenye yomphakathi). Sicela uqaphele ukuthi sihlala sitholakala ngocingo, umbhalo, kanye/noma i-imeyili ukuze siphendule noma imiphi imibuzo futhi siyakujabulela ukunikeza izikhombisi-ndlela, iziphakamiso, kanye/noma iseluleko esihlobene nokuthola "izinto" ongazenza kanye "nezindawo" ongaya kuzo! Noma...uma kwenzeka udinga okuthile noma izinkinga eziphakamayo ngesikhathi sokuhlala kwakho, siyakwazi njalo ukufika endaweni ukuzobeka izinto phansi noma silungise noma yini okungenzeka ukuthi ayilungile!
Ngesikhathi sokuhlala kwakho, uzoba nabo bonke ubumfihlo obufisayo futhi obukufanele (njengoba ababungazi bengahlali emagcekeni, kodwa sihlala kwenye ingxenye yomphakathi). Sicela…